चीन–भारत जोड्ने छोटो बाटोः रानी–विराटनगर–किमाथांका सडक निर्माण कहाँ पुग्यो ? — KhabarTweet
चीन–भारत जोड्ने छोटो बाटोः रानी–विराटनगर–किमाथांका सडक निर्माण कहाँ पुग्यो ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २०, २०७४ समय: २२:०५:३८
काठमाण्डौ । चीन–भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो रानी–विराटनगर–किमाथांका सडक ३९० किलोमिटर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ट्र्याक खोल्न बाँकी ६९ किलोमिटर सडक निर्माणमा गत वर्ष ठेक्का लगाई निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।
खाँदबारी– किमाथांका १६२ किलोमिटर सडकमध्ये ९३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ। खाँदबारीदेखि ठाडोखोला ७० किलोमिटर, हटियादेखि चेपुवा ९ किलोमिटर र किमाथांकादेखि चेपुवा १४ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको उत्तर–दक्षिण ९कोसी० सडक योजनाका इन्जिनियर पशुपति ज्ञवालीले बताए। ठेक्काको जिम्मा पाएका किमाथांका(चेपुवा सडकमा बाँकी ७ किलोमिटर र हटिया–चेपुवा ७ किलोमिटर द्रुतगतिमा काम भइरहेको उनले बताए।
यस सडकअन्तर्गत मुख्य समस्याका रूपमा रहेको अरुण नदीको पुल निर्माण ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। सडक स्तरोन्नतिका लागि समेत योजना कार्यालयले देउराली दोभान सडक चौडा गर्ने काम सम्पन्न गरी ग्राभेलिङ सुरु गरेको छ। योजनाले ०६५–६६ देखि किमाथांका सडक जोड्न प्याकेजमा काम अघि बढाएको र हेलिकोप्टरबाट ट्र्याक्टर र स्काभेटर ढुवानी गरिरहेको इन्जिनियर ज्ञवालीले बताए। रानी विराटनगरदेखि किमाथांका सडक नेपालकै दुई मित्रराष्ट्र चीन–भारत जोड्ने छोटो सडक हो। तेह्रथुमको वसन्तपुरसम्म कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ भने खाँदबारी–वसन्तपुरको १३४ किलोमिटरका केही स्थानमा सडक स्तरोन्नति गर्ने कामलाई समेत सडक विभागले प्राथमिकतामा अघि बढाएको छ।
यो सडकले एक नम्बर प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरवासी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् भने चीनसँग जोडिने सबैभन्दा होचो र मानवबस्ती रहेको नाका भएकाले राज्यलाई नै फाइदा पुग्नेछ। सडक विस्तारले मित्रराष्ट्र चीनसँग व्यापार बढाउने र उत्तरी भेगका जनताले यातायात तथा अन्य सुविधा पाउने भएका छन्। आयोजनाले हाल खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्मको १६२ किलोमिटर सडक १० अर्ब लागतमा काम गर्दै आएको छ। सडक निर्माणमा हालसम्म एक अर्ब आठ करोड खर्च भइसकेको छ। यस वर्ष मात्रै ४२ करोड ८८ लाख विनियोजितमध्ये ३७ करोड खर्च भएको छ।
मुख्य समस्याका रूपमा रहेको अरुण नदीको पुल ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले एकुवासम्म यातायात सञ्चालन हुनेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र दुई लेनको सडक बनाउने भने पनि भनेअनुसार काम हुन सकेको छैन। एउटा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको योजना अर्को प्रधानमन्त्रीले असफल बनाइरहने कामले पनि सडक निर्माण तोकिएको समयमा नहुने गरेको स्थानीय नागरिक छिन्डुम भोटे बताउँछन्। चीनको बाटो हँुदै नेपालमा सामग्री भित्याएर सडक निर्माण गरिएको यो पहिलो उदाहरण हो।
निकै दुर्गम क्षेत्र भएकाले सडक निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको छ। नेपाली इन्धन ढुवानीमा पनि समस्या देखिएको छ। त्यसैले चीनको इन्धन महँगोमा खरिद गरी सडक निर्माण कार्यमा लगाइन्छ। सडक निर्माण र किमाथांका सडक विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा चहलपहल बढेकाले किमाथांका नाका सञ्चालनको तयारी पनि गरिरहेको छ प्रशासनले। सडक विस्तारसँगै सीमा प्रशासन र भन्सार कार्यालय निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। अन्नपुर्ण पोष्टको सहयोगमा